Vaovao - Fa maninona no harafesina ny Grill Stainless vy?
Ny grills ivelany vita amin'ny vy tsy misy dikany dia iharan'ny fepetra henjana. Anisan'izany ny toetr'andro, ny hafanana, ny fanadiovana simika sy ny ratra, ankoatry ny hafa, izay mahatonga azy ireo ho mora harafesina sy pentina. Na dia tsy misy harafesina aza ny anaran'ny vy tsy misy harafesina, dia tsy misy zavatra maro tsy mety ho simba. Ilaina ny fikarakarana sy fikojakojana tsy tapaka mba hampitomboana ny androm-piasany. Ohatra amin'izany ny grills stainless steel. Miankina amin'ny karazana, ny tanjany ary ny endrik'ilay vy tsy misy pentina, dia mety ho voaloto amin'ny pentina harafesina na hiova loko rehefa mandeha ny fotoana.
Ny hamandoana, ny hamandoana be loatra ary ny rivotra masira (toy ny any amin'ny faritra amoron-tsiraka) dia mety hiteraka harafesina eo amin'ny eny ambonin'ny giro, toy ny fanasan-damba mivondrona sy ny fanadiovana hafa misy chlorine.
Ny bleach mivondrona sy ny fanadiovana hafa misy klôro dia mety hiteraka harafesina, ka izany no tsy tokony hampiasaina amin'ny vy tsy misy pentina.
Miforona ny setroka mandritra ny fandrahoan-tsakafo, izay mety hanafana be loatra sy hanimba ny lokon'ny vy tsy misy pentina.
Ny afo misy menaka dia mahatonga ny endrik'ilay vy tsy misy pentina ho maizina, fa tsy manimba ny fitaovana. Ny fanadiovana tsy tapaka ny faritra fandoroana sy ny ao anatin'ny giro dia hampihena ny mety hisian'ny afo tsy ilaina.
Fanamarihana: Ny vy tsy misy vy dia tsy 'harafesina' toy ny vy mahazatra izay misy sosona oksida mena miforona eo ambonin'ny tany ka mipoitra. Raha mahita harafesina ianao, dia azo inoana fa avy amin'ny poti-by (ohatra ny volon'ondry vy) miangona eo ambonin'ny vy tsy misy pentina. Ireo potikely ireo no harafesina fa tsy ny vy tsy misy vy mihitsy.
AHOANA NO HIsorohana ny harafesinao?
Tokony hodiovina ny grills isaky ny ampiasaina mba hisorohana ny harafesina. Ataovy azo antoka fa esorina ny fandoroana entona entona alohan'ny hanadiovana, ary ampiasao borosy giro mba hanesorana ny poti-javatra mety hiraikitra amin'ny makarakara. Azonao atao ihany koa ny mandinika ny fanadiovana amin'ny borosy makarakara tsy misy bristle mba hisorohana ny volom-borona mivaha sy miraikitra amin'ny makarakaranao.
Ho an'ny grenady saribao dia tsara ny manadio azy ireo raha mbola mafana, amin'ny fampiasana borosy sy famafazana rano. Aorian'ny fanadiovana ny makarakara sy ny famelana ny gilasy hihena, ario ny lavenona na ny arina sisa tavela ao anaty giro ary diovy amin'ny rano savony malefaka ny vata fampangatsiahana.
Omeo fanadiovana lalina isak'izay
Tsara ihany koa ny manao fanadiovana lalina tsy tapaka. Mba hanaovana izany, esory ny makarakara ary diovy amin'ny rano mafana, kaopy iray misy savony malefaka ary 1/4 kaopy soda. Alefaso mandritra ny adiny iray izy ireo ary araho amin'ny borosy. Rehefa avy nangatsiaka ny giro dia fafao amin'ny lamba malefaka ny makarakara mba hanesorana izay sakafo miraikitra amin'ny borosy na borosy.
Manaraka, diovy ny fandoroana ny makarakara miaraka amin'ny mpanadio tsy misy abrasive sy lamba. Tianao ho maina sy ho madio ny lovia mitete, satria mety ho mora voan'ny hamandoana. Amin'ny borosy sodina, diovy ny lavaka fandoroana sy ny lavaka fidirana.
Aza adino ny manadio ny ivelan'ny gironao amin'ny savony fanasan-damba malefaka sy/na poloney mifanaraka amin'ny ety ivelany amin'ny gironao. Na dia eo aza ny anarany, na dia ny vy "stainless" aza dia mora voan'ny tasy sy harafesina, arakaraka ny haavon'ny metaly sy ny hatevin'ny metaly.
menaka ny Grillo
Aorian'ny fanadiovana dia asio menaka misy menaka manify ny makarakara entona sy saribao mba hisorohana ny sakafo tsy hiraikitra amin'izy ireo any aoriana. Ny fanaovana izany dia hanampy amin'ny fanesorana ny hamandoana - ary noho izany ny harafesina. Na izany aza, mba tsy ho azo antoka, dia aza mampiasa menaka manitra aerosol, satria efa fantatra fa mipoaka eo akaikin'ny lelafo ny kapoaka aerosol. Fa kosa, asio menaka kely amin'ny lamba fanasan-damba ary ampiasao izany hanesorana ny giro.
Sarony ary afindra ao anaty trano
Ny hamandoana no meloka lehibe indrindra izay hanala harafesina ny gironao ary hampihena ny androm-piainany. Rehefa tapitra ny vanim-potoanan'ny fandrahoan-tsakafo, dia asio fonon'ny nylon na vinyl mipetaka tsara miaraka amin'ny fonon-damba eo ambonin'ny gironao.
Raha azo atao, dia afindrano ao anaty garazy na trano fialofana voarakotra ny giro azo entina ao an-trano, indrindra raha miaina amin'ny toetr'andro izay mora hamandoana be, orana be na lanezy ianao. Raha mipetraka akaikin'ny ranomasina ianao, dia mitandrema manokana amin'ny fanadiovana sy ny fandrakofana ny gironao, satria mety hanimba azy koa ny haavon'ny sira eny amin'ny rivotra.